Top 5 Talooyin online ammaanka shukaansi.
Last updated: Sep. 15 2019 | 3 min akhri
Sida in shukaansi dhaqameed, shukaansiga online uusan qaado waxaa la ah khatarta yar. Waxaa jira had iyo jeer ay noqon doontaa dadka halkaas kula xumaan u dan ama waxyeello. Inkastoo dhowr adeegyada shukaansiga online talaabooyin baaritaanka iyo ammaanka inay gacan bir ah dambiilayaasha qaar ka mid ah ama dadka is qaba, tani ma aha mid foolproof, waana gebi ilaa shakhsiga la qaado talaabooyin difaac gacmahooda.
Halkan waxaa ku qoran shan naseexooyinka badbaadada shukaansiga online in ay aad muhiim in aad naftaada ilaalinta markii shukaansi online:
1. Samee xisaab email si qarsoodi ah. Isticmaal adeeg email free account sida Hotmail ama Yahoo! in ka sameysataa xisaab email ah in uusan bixin wax macluumaad shakhsiyeed. Ha isticmaalin cinwaanka email shaqadaada ama cinwaanka ah in muujinaysaa magacaaga oo buuxa marka la kulan shukaansiga online xidhiidhka. Sidoo kale, ha bixin cinwaanka emailkaaga aad ugu dhaqsaha badan. Waxaa jira dadka qaar halkaas oo isticmaala adeegyada shukaansiga online in la soo ururiyo cinwaanada email ka kelida ah oo aan waxba galabsan si ay u soo diri kartaa fariimaha spam.
2. Sii lambarka telefoonka gacanta halkii lambarka guriga marka stage phone call of shukaansiga online ah. Haddii aad ku qoran yihiin buugga telefoonnada, bixinta lambarka taleefanka guriga waa ficil ahaan la mid ah sida bixinta aad magaciisa oo dhan iyo guriga address. Iyadoo technology online, waa ay fududahay in nooca lambarka taleefanka guriga galay Google, iyo, haddii tirada ku qoran yahay, magacaaga iyo cinwaankaaga ilaa tusi doono oo ay la socoto lambarka telefoonka. Waxaad la siinayo laga yaabaa in macluumaad dheeraad ah oo badan aad u malaynayso in aad tahay.
3. La kulan meel dadweynaha ee taariikhaha yar ugu horreeya. Meel dadweynaha balanqaadayo heer sare ah oo ammaanka iyo nabadgelyada sida waxaa jiri doona markhaatiyaal badan oo oo taariikhda ma ogaan doonaa cinwaanka gurigaaga. Waxaa kale oo fikrad fiican inaad u sheegto saaxiib halka aad joogi doonto iyo goorta aad ku noqon doontaa soo laabtay, kaliya haddii ay dhacdo.
4. Had iyo jeer ha ka daalin qof weydiisanaya lacag. Haddii qof aad la xidhiidho iyada oo loo marayo adeeg shukaansiga online ka bilowdey aad weydiisanaya lacag ka hor inta aad la kulanto, waxaad ku dhawaad ​​damaanad qaadi karno ay tahay idho. Waxaa jira hay'adaha ìRussian Brideî baxay waxaa isku dayayaan in ay fadeexad rag jaahiliinta ka mid ah lacagta ay haweenku (mararka qaarkood haweenka ee xitaa ma run ahaantii way jiraan) weydiiso lacag raggii duulimaadyada ka baxay si ay u arkaan, kaliya inay baaba'aan kadib markay helaan lacagta. Ma jirto sabab in shukaansiga online waa lug lacag siinta qofka kale. Haddii aad rabto in aad soo booqato Iveta ee Slovenia, duuli soo baxay inuu arko, ma ku Daynanaa Iyagoo iyada lacag siiyaan,.
5. Kalsoonow mindhicirka. Haddii aad dareen mindhicirka kuu sheegayaa in nin ama gabadh aan aad runta u sheegaan, waxa uu leeyahay niyad xun, ama aakhirka kuu geysto doonaa, dhagaysan dareen in. Haddii aad aragto wax calamada casaanka, sida adiga oo riixaya wixii macluumaad shakhsi aad ugu dhaqsaha badan, si aad u soo qaado marka aad guriga u ah taariikhda ugu horeysay isagoo sheegay, ama badnaanta ku leeyihiin xitaa ka hor inta aad la kulanto, qabaa labo jeer ku saabsan wadaaga lambarka telefoonka aad, cinwaanka email, ama gaar ahaan cinwaanka gurigaaga. Sidoo kale isha ku hay qof oo laga yaabaa in mar hore la guursan. Haddii ay marna rabin inaad soo wacdo, ma siin doontaa faahfaahin ku saabsan hab-nololeedkooda, iyo isku dayaan in ay ka dhigaan wax walbo qarsoodi ah, waxaa suuro gal ah in aad qof ee is qaba qabashada.
Xusuusnow in inkastoo goobaha shukaansi qaar tout baadhitaan taariikh, aad qabto in ay sii joogaan on your ilaalin. Dadka xagooda karaa iyada oo kabkab baadhitaanka taariikhda sidaas ha u jeegaga dembiyada iyo guurka ku siin dareen been ah oo ammaanka. Shukaansi Online noqon karaa hab nabad iyo madadaalo inay la kulmaan kelida ah oo tayo leh, laakiin marnaba qaadan wax u siiyey iyo goorba u dhawraan aad ilaaliye ilaa bilowgii.